Iingcebiso Zomyili | May 2022
The Best Kitchen Countertop Materials - Isikhokelo seNdawo yokuKhanya kweKhitshi
Iingcali ziqhekeza zonke iingenelo kunye neengozi zezinto eziphambili zekhitshi zekhitshi kuhlahlo-lwabiwo mali kunye nesitayile.
Iimfihlo ezi-5 zokuHombisa ngaphakathi eziPhambili- Iingcebiso zokuhombisa kunye namaqhinga avela kwiiNkqubo eziLungileyo
Khetha imibala yakho yepeyinti okokugqibela, khetha indawo yokuhlala engalinganiyo, kwaye ungakulibali ukukhanyisa kwekhabethe. Nazi iingcebiso ezingcono kunye namaqhinga avela kuyilo.
Yintoni iPeyinti ePhakamileyo yeGloss? -Yonke into yokwazi malunga neGloss ephezulu igqityiwe
Yintoni ipeyinti ephezulu yegloss? Funda konke malunga neenzuzo kunye nengxaki yokuhombisa okuphezulu kunye nokupeyinta okuphezulu okuphezulu apha, kunye neendlela ezinesitayile zabaqulunqi abazisebenzisayo ukuguqula igumbi.
Iindidi ezi-5 eziPhezulu zePeyinti ezigqityiweyo- Indlela yokuKhetha ukuGqiba kwePeyinti
Funda konke malunga neentlobo ezahlukeneyo zokugqitywa kwepeyinti kunye nendlela yokukhetha eyona ilungileyo kwigumbi ngalinye endlwini evela kwingcali yepeyinti.
Indlela yokuxhoma iphepha lodonga-Isikhokelo sokufakwa kwePhepha lodonga
Inkqubo yokufaka iphepha lodonga inokuba nzima, ke senziwe udliwanondlebe neengcali ukufumanisa yonke into oyifunayo ngaphambi kwexesha.
Uyibeka njani irug kuwo onke amagumbi endlu-eyona ndawo yokubeka iirugs zalapha
Isikhokelo senyathelo nenyathelo sokubeka umbhoxo wendawo kwigumbi lokuhlala (nokuba ubungakanani bendawo yakho!) Kunye nendawo yokubeka ityali kwigumbi lokutyela nakwigumbi lokulala. Iqukethe iingcebiso zeengcali ezivela kuCyrus Loloi weLoloi Rugs.
Iindlela ezi-2019 zokuHombisa kweKhaya-Iindlela eziHleliyo zaKhaya
Ukutsha kweNtengiso ePhakamileyo, kukho ukubulawa kweendlela ezintsha ezithatha uyilo lwehlabathi ngesiqhwithi. Ubume, umbala, kunye nolungiselelo, yile nto uza kuyibona kuyo yonke indawo, kuwo onke amagumbi endlu.
Iingcamango ezingama-20 zePhepha lodonga lokuThengisa - Iifoto zeBold Wallpaper kunye neMibono yokuHombisa
Iphepha lodonga lale mihla linomzuzu ophambili kuyilo lwehlabathi. Funda ngendlela abayili bangaphakathi abanesitayile ngayo lodonga lwangoku ukunika imeko yeklasikhi i-spin entsha kunye nokuphefumlelwa yimizekelo emihle engama-20.
Izimvo zombala weGrout-Uyikhetha njani iMibala yeGreen eyiyo
I-Blogger uCarrie Waller uyasigcwalisa ngendlela yokukhetha imibala ye-grout engaqhelekanga kwiprojekthi yakho yethayile elandelayo, kunye nendlela yokuyisebenzisa njengepro.
Ungayikhetha njani ilinen ebhedini- Iingcebiso ngokuthenga amaphepha
Umseki weDwellStudio wabelana ngeengcebiso ezintlanu.
Iingcamango ezili-10 eziGlasi zewindow- iiYilo eziGlasi zaManje
Ngaphambili, fumana iingcamango ezili-10 zeglasi zokukhuthaza uyilo lwakho lwefestile, ukusuka kutoliko lwangoku ukuya ekuthatheni okuqhelekileyo.
I-'Bunkie 'Inokuba Yeyona Ndlu YeNdwendwe Egqibeleleyo- Yintoni iBunkie?
Ezi zakhiwo zincinci zilungele iindwendwe zasebusuku okanye zisebenza ekhaya — akukho mvume iyafuneka!
Imibono yokuhombisa ngeTafile yeKofu-Uyayihombisa njani itafile yeKofu
Abaqambi basibonisa indlela yokufumana uyilo, ukujonga ngobuchule kwitafile yakho yekofu.
Umahluko phakathi kweTartan kunye nePlaid - iTartan kunye nePlaid Fabrics
Umyili weScot Meacham Wood usixelela umahluko phakathi kwe-tartan kunye ne-plaid.
Uhlobo lwesiNgesi kwigumbi lokuhlala -Indlela yokuhombisa ngesimbo selizwe lesiNgesi
Umyili uScot Meacham Wood wabelana ngeyona ngcebiso yakhe ilungileyo yokufumana igumbi lokuhlala eliphefumlelweyo, likaRalph Lauren.
Ungayifihla njani i-Ugly Window Conditioner- Iingcebiso ngokufihla iWindows Window
Umyili we-Genevieve Gorder wabelana ngethiphu yakhe ngokufihla ifestile yomoya engalunganga.
Yintoni igaraji yezixhobo? -Uyakha njani iGaraji yezixhobo
Abaqulunqi babelana ngendlela abazenza ngayo iigaraji zezixhobo zokugcina iitomaster, abaxube, oomatshini bekhofi kunye nezinye izixhobo ezincinanana ezivela ekufumaneni izinto zokubala.
Amaqhinga oMyili weTafile eziNde-Ingcebiso yoMyili wangaphakathi
Thatha oku kubaqulunqi bangaphakathi ukuba unophahla olufutshane, kodwa ufuna ukubenza babukeke bude kakhulu.
Iindidi ezi-8 zoPhahla oluLungileyo kumakhaya onke kunye nesitayile
Sithatha ukuntywila okunzulu kwiindidi ezininzi zesilingi ezisuka kwithambeka ukuya kwindawo ethambekileyo, sisebenzisa izibonelelo zabo, iimpawu kunye neengcebiso malunga nendlela yokukhupha okona kulungileyo kukhetho ngalunye. Funda konke malunga neendidi ezahlukeneyo zesilingi ezingezantsi.
Ephakamileyo kangakanani kufuneka uxhomeke kwiNgcebiso yoMfanekiso oLingayo
Ukuba ufuna ukuba imifanekiso yakho ibonakale intle, aba babhali bathi kufuneka ubenazo ii-intshi ezingama-57 ukusuka phantsi.
Iibhari zesidlo sakusasa kwisiqithi sasekhitshini
Ukuhonjiswa kwegumbi lokulala okungwevu
izindlu zamachibi ezinamagumbi okuhlambela